तपाईंलाई सबैभन्दा बढी सताउने कुरा के हो ? किन - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः माघ ६, २०७४ - साप्ताहिक
तपाईंलाई सबैभन्दा बढी सताउने कुरा के हो ? किन
मलाई सबैभन्दा बढी सताउने मेरो आफ्नै रिस हो, किनभने मलाई धेरै रिस उठ्छ । रिसका बेला म कसैलाई पनि चिन्दिनँ अनि मदेखि सबै रिसाउँछन् ।
विदेशी भूमिमा भएकाले परिवार अनि नानीहरूको मायाले सताउँछ । किनभने माया त माया हो नि, न रोएर जान्छ न धोएर ।
मलाई मेरो आफ्नै विधाको अस्तव्यस्तता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सताउँछ । भोलि यसको भविष्य के होला भनेर हरपल सताइरहन्छ ।
फेसबुकमा अरूले गरेको मेन्सनले सताउँछ ।
जाडोमा राति सुतेका बेला लाग्ने पिसाबले । एकपटक निद्राबाट ब्युँझिएपछि फेरि निदाउनै गाह्रो ।
नेताको कामले सताउँछ ।
साँझ पर्नै हुन्न, कान्छीको भट्टीको सोलमारी र छोइलाको यादले सताउँछ । सिजनको चिसो कटाउन नभै नहुने रै’छ ।
बाटो बिराएको मान्छे
कमाए पनि त्यस्तै छ जिन्दगी, नकमाए नि त्यस्तै छ जिन्दगी । मलाई धेरै सताउने भनेको यही कुराले हो ।
गोविन्द धिमाल सोमकुल
एनटीसीको डाटाले ।
मलाई चिन्ताले सताउँछ ।
बितेका पलहरूले बढी सताउँछन् ।
पैसाको कमीले ।
स्लो इन्टरनेटले सताउँछ ।
बोलिरहने मान्छे अचानक टाढा हुँदा ।
जसलाई धेरै मिस गरिन्छ, उसले वास्ता नगर्दा रिस उठ्छ । त्यही कुराले सताउँछ पनि ।
टाउको दुखाइले सताउँछ ।
धोका दिने मानिसहरूले बढी सताउँछन् ।
आमाको यादले बढी सताउँछ ।
अमृता मैनाली पाठक
पैसा र प्रेमले सताउँछ ।
कसैसँग बिताएका पलहरूले अनि पश्चाताप पनि हुन्छ ।
डीके एन पीके
मायालुको यादले । किनभने त्यसलाई बन्द गर्ने कुनै अप्सन हुँदैन । यसले दैनिक सताइरहेको हुन्छ ।
जीवन सोचेजस्तो नहुँदा ।
उसको मायाले ।
मलाई त अहिले ११ को रिजल्टले खुब सताइरहेको छ । खालि आयो–आयो मात्र भन्छन् ।
पुराना सम्झनाहरूले । सम्झना जति पुराना हुँदै जान्छन् त्यति नै ताजा बन्दै जान्छन् । जति ताजा बन्दै जान्छन् त्यति नै तिनले सताउँदै जान्छन् ।
मेरी जीवन संगिनी कस्ती होलिन् भनेर, किनभने म मागी विवाह गर्दैछु ।
देशको अस्थिरता अनि सिस्टम देख्दा अत्यास लागेर आउँछ । देशको विकास कसरी होला यो तरिकाले ? उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी छैन । पुँजी पलायन छ । युवा शक्ति विदेशमा छ, स्वाभिमान गिर्दाे छ । सताउनलाई यी कुरा पर्याप्त छैनन् र ?
प्रकाशित :माघ ६, २०७४
किन चलिनन् शिल्पा ?